Prof. Gaas oo shaaciyey in ololihiisa doorashada uu dhowaan ka bilaabayo Puntland (Dhegeyso) – Radio Daljir
Seteembar 16, 2013 3:11 b 0
Lusaka, September 16, 2013 – Ra?isal wasaarihii hore ee Soomaaliya Prof. Cabdiweli Maxamed Cali (Gaas) ayaa weli booqasho ku jooga magaalada Lusaka ee dalka Zambia, isagoo halkaas si diiran loogu soo dhoweeyey, booqashada ra?isal wasaarihii hore ayaa qeyb ka ah ololiha doorashada madaxtinimada Puntland ee debeda ka wado.
Prof. Cabdiweli Maxamed Cali (Gaas) oo waraysi uu siiyey radio Daljir wuxuu ku sheegay in uu sii wadi doono ololihii doorasho, isla markaasna wakhti aan fogeyn oo uu imaan doono deeganada Puntland oo haatan looga diyaar-garoobayo doorashada 2014-ka.
?Maaha wakhti dheer laakiin hadii Eebe idmo waxaan dalkii tegi doonaa dhowaan weliba wakhti aan fogeyn si aan halkaas uga bilaabo ololahayga doorasho, oo aan kalsooni wanaagsan ku qabo? ayuu yiri Prof. Gaas
Wuxuu sheegay Prof. Gaas in uu rajo wanaagsan ka qabo doorashada Madaxtinimo ee Puntland ka dhacaysa sanadka soo socda, isagoo xusay in ay jirto aragti badan oo dadka reer Puntland qabaan taas oo isaga u sahlaysa in uu hugaamiyo sanadaha soo socda maamulka Puntland.
Ra?isal wasaaraha ayaa waraysiga uu siiyey idaacada Daljir, ?wuxuu kaga hadlayo arrimo kale oo badan oo la xiriira xaalada dalka Soomaaliya ee wakhtigan iyo marxalada taagan.
DHEGEYSO:- Iimaan Maxamed Jaamac oo Daljir ka tirsan ayaa waraystay Prof. Cabdiweli Gaas
QM oo ka dalbatay ka qeyb-galayaasha New deal in ay miiska saaran taageerada dhaqaale Soomaaliya